ကျမရဲ့နေရာလေး: July 2013
Posted by မီးမီးငယ် at 2:14 PM 12 comments Links to this post
ဇင်းမယ်ကမန္တလေးဘူတာရုံနဲ့ သူတို့ တသိုက်..
တော်တော်နဲ့ အခွင့်မသင့်ခဲ့ပါဘူး..။တနေ့ ညနေခင်းမှာတော့ ကလေးများအားလုံးရဲ့ ဆရာမကလည်း၊
အထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စ သူတာဝန်ယူမယ်တဲ့..။အော်...ခွင့်ပြုမိန့် တင်ပြရအုံးမယ်လေ...။ခလေးတွေလည်း ငယ်သေးတယ်။သူများနေရာမှာ သိပ်ပြီးလပ်လျားလပ်လျားနဲ့ လမ်းမပေါ်တက်ကစားနေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ...။
ခလေးအားလုံးကလည်း သွားဖို့ အဆင်သင့် ဒေါ်မီးအားချိန်ကိုချောင်းနေကြရှာတာ..။
Mအမက စည်းကမ်းကြီးတယ်။ လူတအုပ်လုံး သူများနိုင်ငံမှာကျွေးထားရတယ်ဆိုတာကလည်း၊ တကယ် မလွှယ်တဲ့ကိစ္စပါဘဲ။သူမပြန်လာခင် သူ့ အမေ(ခလေးတွေရဲ့ အဖွား)ကို နားလည်မှု့ ယူပြီးသွားကြမှာလေ..။
အမကဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပြသာနာမဖြစ်စေချင်ဘူး..။ ဒါကြောင့်သူပြန်လာမဲ့အချိန်ကိုမှန်းပြီး အရောက်ပြန်လာ ပါ့မယ်ဆိုတဲ့၊ဂတိတွေတလှေကြီးပေးပြီး သကာလ ဒေါ်မီးတယောက်ခလေးတသိုက်နဲ့ စက်ဘီးစီးထွက်ကြ
ပါတယ်...။အိမ်နှဘေးကလမ်းသွယ်လေးကနေထွက်ပြီး လမ်းကြိုလမ်းကြား၊လမ်းမြောင် (ထိုင်းမှာနေဖူး တဲ့သူတွေဆိုရင်သိကြမှာ၊အဲ့မှာတကယ် လမ်းသွယ် လမ်းကြား လမ်းမြောင် အတန်မတန်ပါတယ်ဗျား..)
ကနေဖြတ် သွားကြမယ်။ လမ်းမကြီးပေါ်လုံးဝမတက်ပါဘူး ဆိုတဲ့ဂတိကလည်းရှိသေးတယ်လေ...။
ဟိုဟို ဒီဒီသွားရင်းနဲ့ ဘူတာရုံဖက်ကိုရောက်သွားပါရောလား...။ ဘူတာရုံဆိုတာကလည်း ကျမတို့ ဆီကလို
ခြံစည်းရိုးတွေဘာတွေကာပြီး ဝင်ကြေးကောက် အိပ်ကပ်ထဲထည့်..အဲလိုမပြောပါဘူးလေ...အဟဲ...အော်..
ခြံစည်းရိုးမရှိဘူးပြောမလို့ ပါ..ဒီအတိုင်း ကူးလူးသွားလို့ ရတယ်..။လမ်းပေါ်ကနေလှမ်းမြင်နိုင်တယ်..။
ဒီတခါတော့ ခါတိုင်းနဲ့ မတူ..လူတွေနဲနဲများနေသလိုဘဲ...ရထားလည်းမဆိုက်ဘဲနဲ့ဘာလို့ လူတွေများ သလဲလို့ စဉ်းစားမိသား..။နောက်တော့ အဲနားမှာ ခဏရပ်ပြီး ဘုစုခရုတွေကိုစောင့်ရင်းနဲ့ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်လိုက်တော့ လားလား..ဆိုင်းဘုတ်က မန္တလေးဘူတာရုံ ဆိုပြီးရေးထားတာ..(ယာယီခဏပုံစံ)
အဲ..နောက်ထပ်ပြီးသေသေချာချာကြည့်မိမှ ဓါတ်ရှင်တွေရိုက်နေပါကောလား...။ စိတ်ဝင်စားစရာ..။
ဘိုကားဗျ...ဘိုထီး ဘိုမတွေနဲ့ ...ရှေးဟောင်းကားပုံစံ၊အဝတ်အစားက စစ်ဝတ်စုံတွေလည်းပါတယ်.။
ကိုယ့်အုပ်စုတဲမှာခလေးအကြီးဆုံးက ၁၃ နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ် သူတို့ကျမကိုစကားပြော ရင် ဗမာလိုပြောတယ်။အောက်က အသေးလေးတွေကျတော့ ထိုင်းလိုပြောတယ် ..။ အချင်းချင်းကျတော့ ကချင်လိုမှုတ်ကြတယ်...။ဟေ့..ဒီမှာရေးထားတာ မန္တလေးကွ..လို့ ပြောတော့၊ ဟား..ကျမ တို့ တသိုက် ရဲ့ ကွီကွ၊အီးအား ပွစိ အသံမျိုးစုံ ကိုကြားတဲ့ဘိုကြီးတွေ ထိုင်းတွေ ဘာလူမျိုးမှန်း မခန့် မှန်း တတ်တော့ ဘူး..။ပြူးပြီးကြည့်ကြတယ်..သူတို့ ကိုကျမတို့ စပ်စုတာထက် သူတို့ ကကိုယ်တို့ ကိုပြန်စပ်စုနေတာနဲ့ 
မနေပြန်ပြေးထွက်လာရတယ်လေ..။အချိန်ကလည်းမရတော့ဘူး...ဟင်း..နို့ မို့ ရင်..မယ်ငီးတို့ တသိုက်
ဟောလိဝုဒ်ဓါတ်ရှင်ထဲမှာ တခန်းမပါလာနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ...( လွဲချက်ကယ်နာ :P )
သူတို့ ဆီကိုရောက်လာတဲ့သူတို့ အမျိုးတွေဆိုရင်လည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်..။ကျမသိခဲ့တဲ့
ညီအကို ၂ယောက် သီချင်းဆိုတာအရမ်းကောင်းတယ်။ အဲ့ညီအကိုက ဂျပန်သွားဖို့ လုပ်နေတာတဲ့.....။
ထုံးစံကတော့ကြာတာပေါ့.လူကြုံရှိလို့ သူတို့ အိမ်ကစာပါးလိုက်တယ်။အဲဒါစာလာယူရင်း စကားတွေပြောမိ ကြတယ်လေ.။သူ့ အမေကစာထဲမှာရေးထားတာ..သားရေသွားစရာရှိတာလည်းအမြန်လုပ်ပါ၊အိမ်ကနွားနဲ့ 
အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်တွေလည်းကုန်တော့မယ်တဲ့...:)) အဲဒါတွေပြောပြီး တဟီးဟီးနဲ့ အော်ရီနေကြတယ်..@_@
နောက်အမျိုးတယောက်လာမယ် ထမင်းစားမယ်ဆိုတော့ မယ်ငီးတို့ ဝင်ပြီးကူညီချက်ပြုတ်ရတယ်လေ...။
ရောက်လာတော့..ဟယ်..နင့်တို့ ကချင်အမျိုးကလည်း ကုလားရုပ်ကြီး..လို့ ပြောမိတယ်..။တကယ်ပါ..
မြန်မာပြည်မှာ နံမည်ကြီးတဲ့ အဆိုတော်တဲ့...ဟင်းဟင်း...ဒေါ်မီးတော့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ လုံးချာလိုက်နေတာ
ဓါတ်ရှင်တွေ ဘုတ်အုပ်(ဝတ္တု) တွေဆိုတာ ဘယ်မှာအချိန်ပေးနိုင်လို့ လဲ...။ထမင်းစားပြီးတော့ ဂစ်တာတီးပြီး
သီချင်းဆိုပြမှ အော်..သူ့ အသံကောင်းမှန်းသိတော့တယ်..။အဟဲ...ဘဲဒီးဆော်ဒီး..အဆိုတော်ကြီးရေ..။
(တလောက နော်ဝေသတင်းတခုမှာတွေ့ ရတယ်.သူနော်ဝေမှာရောက်နေတယ်တဲ့။သတင်းထဲမှာ..
သီချင်းဆိုလို့ ...သိကြလိမ့်မယ်နဲ့ တူတယ်..)
ဒေါ်မီး ရဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေ(သူများအကြာင်းတွေရေးချင်ပေမဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းဘဲသိလို့ ..အဟီး) တစုထဲထားကြည့်လိုက်တော့ အတော်များတာဘဲ...
ဟွန့် ...ပြာဂလောင်စိန်အတ္တုပတိ..ဘုတ်အုပ်ကြီးထုတ်အုံးမှ ^_^
Posted by မီးမီးငယ် at 10:07 AM 10 comments Links to this post
ကျမတို့ နိုင်ငံသားတွေဟာ ရှိတာလေးနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြံဆောင်နေထိုင်လာခဲ့ရတာ၊နှစ်ပေါင်းများစွာ
ရှိပြီလေ..။အားသာတဲ့အချက် တခုကတော့ သူများနိုင်ငံသားတွေထက်အများကြီးကြံရည်ဖန်ရည်ရှိတယ်။
ကျမ ကျိုင်းမယ်ရောက်တဲ့ အချိန်ကာလ ကအခုလောက် မြန်မာတွေသိပ်မများသေးဘူး..။
night bazaar ညဈေး လည်းသိပ်ကြီးမစည်ကားလှပါဘူး၊ဆိုင်တန်းတွေလည်းမပြည့်ဘူး။ ဘယ်ဖက်ခြမ်းက
ဈေးတန်း အလယ်ခေါင်မှာမြေကွက်လပ်ကြီး အကျယ်ကြီးရှိသေးတယ်။ညာဖက်ခြမ်း၂ထပ်ဆောက်အဦမှာ လည်း ဟောင်းလောင်းကြီး ည ၈နာရီ ၉နာရီကျော်ရင် ခြောက်ကပ်နေပြီ..။ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ လမ်းလျောက်တဲ့လူလည်းနဲနဲလေးဘဲ..။ခုတော့ လမ်းတောင်လျောက်လို့ မရဘူး၊ဈေးဆိုင်တန်းတွေနဲ့ ၊ အပြည့်ဘဲ..အဲ..ရောင်းချနေတဲ့လူတွေကိုမြန်မာစကားသာပြောကြည့်ပါ...။ ရ၅ % က မြန်မာပြည်က လာ တယ်လို့ပြောကြတယ်...။ ရှမ်းပြည်ကမွန်ပြည်ကကရင်ပြည်က..သူတို့ အားလုံးကိုမေးရင်မြန်မာပြည်
စါရင်းချုပ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါ..။သိကြပါတယ်..။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဘဲ ဖြေတတ်ကြတဲ့သဘောတွေရှိတယ်
ကဲပါလေ.. ပြောချင်တာက အဲဒီခေတ်ကာလမှာ မြန်မာပြည်ကလာတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကို အမျိုးအစားခွဲ ကြည့်ရင် သိပ်မများသေးဘူး...။ခေတ်ရဲ့ စနစ်အရပေါ့ရှင်..ကျောက်မျက်ရတနာအရောင်းအဝယ်၉၅% ကတော့ နယ်စပ်ကနေ..ဒိုးကြတာပါဘဲ..။သတင်းစာတွေထဲမှာရေးရေးနေတာဘဲလေ..မှောင်ခို..တဲ့ :))
အဲဒီမှာ...ကျောက်ကုန်သည်လို့ ခေါ်နိုင်တဲ့ ကချင်ကျောက်စိမ်း၊မိုးကုတ်ပတ္တမြား ဒါတွေလာရောင်းတဲ့လူ၊ အဲ့ခေတ်မှာခေါ်တဲ့ပြည်ပြေးသောင်းကျန်းသူ(အဖွဲ့ တွေလည်းအများကြီး...ရှမ်း၊ကချင်၊ကရင်၊ကရင်နီ၊
ဘာညာဘာညာ...တကယ်ကြီးကို မသိတာပါ)နဲ့ အဓိက ကတော့ရှမ်းပြည်ကလာတဲ့ အလုပ်သမားများ၊
ဒီမှာ ၂မျိုးခွဲလို့ ရတယ်နော့်...။တခုက ကြက် မမ လေးတွေ...(ဟမ် ^_^ သူတို့ ကိုလှတပတနာမည်လေး တပ်ခေါ်တာလေ...မှန်ဘောင်အနောက်မှာအလုပ်လုပ်သောလူတန်းစားလို့ မှတ်ပေးပါရှင်)၊နောက်တမျိုးက
ဒါပေမဲ့နည်းတယ်။ကရင်တွေကျတော့အိမ်ဖော်လုပ်တာ များတယ်။ကျမလေ အဲ့မှာနေပြီး နဲနဲလူပါးဝလာ
တော့ ကျိုင်းတုံကလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောတော့ ဘူး..။တောင်ကြီးကပါလို့ ပြောတော့တယ်.......@_@
တကယ်ပါ..ကျိုင်းတုံက ရှမ်းမဆိုရင် မယ်ကိုင်(ကြက်မ) ဒါဘဲ ထင်ကြတယ်။ ထိုင်းယောက်ကျားတွေ လည်း
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မယားငယ်အယူဆုံးယောက်ကျား လို့ တောင်ပြောလို့ရတယ်။ ညညသွားသောက်စားပြီး
အမြှောင်တွေထားတတ်ကြတယ်။ သူတို့ အမြှောင်တွေကြည့်လိုက်ရင် ရှမ်းမ...ဘယ်ကလာသလဲမေးရင်
အဲ...ပြောရင်းတခုကျန်သွားတယ်။ နယ်စပ်မှာတစ်ခု၊တစ်ကျပ်သား၊တပဲသား ကိုကျပ်ရာဂဏန်းလေးနဲ့ ဝယ်
ထိုင်းထဲရောက်ရင် ဘတ်ထောင်သောင်းချီတန်တဲ့ ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး....ဒါမျိုးက ဟိုးကတဲကရှိပြီး.. ခုထိရှိနေဆဲပါ:P နောင်လည်းပျောက်ကွယ်ဖို့ လမ်းမမြင်ပါဘူး။ သူတို့ လူတန်းစားကတော့တမျိုးပေါ့...
ကိုယ်တို့ လိုမဟုတ် မြေကြီးမထိတဲ့မိုးပေါ်ကလူတန်းစားလို့ မှတ်ပေးပါ။ကဲ..ဒီလိုကျမတို့ဆီကလူမျိုးစုံ
ပေါင်းစုံဟာ အေးချမ်းတဲ့ ကျိုင်းမယ် ရှေးခေတ်က ဇင်းမယ် ထိုင်းလင်း မှာ မှီတင်းနေထိုင် ကြပါတယ်လေ..။ အဟဲ..မြို့ ကတကယ်ရာသီဥတုအေးပါတယ်။ခုတော့ ပူလို့ ကားကျပ်ပြီးရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါတော့တယ်...။
(ကိုကြီးသက်ဆင်ကောင်းမှု့ လေ...@_@...သူ့ ကြောင့်အရမ်းတိုးတက်ခဲ့တယ်)
ကျိုင်းမယ်မှာသံရုံးတွမရှိပေမဲ့လည်း...ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတွေရှိတယ်။မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမရှိတော့ မသိပါဘူး..။(စကားဦးကလည်းသန်းထားရတာ..အကြာကြီး..လိုရာဆွဲလာလို့ ကိုမရသေးဘူး...:))
ဟိုး...လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ၂ဝကျော် ၃ဝနီးပါး ကပေါ့..ဘယ်လိုပြောရပါ့...(ဖြစ်ညှစ်စဉ်းစားစမ်းမယ်ငီး)
အဲ...မေ့နေတာ..နဝတ ခေတ်ကလေ..။နဝတ ပတ္တမြားဆိုတာကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်...။
မကြားဖူးခဲ့ရင်လည်း...မယ်ငီးဘဲ..နဲနဲအာလူးပေးရတာပေါ့...။ အဲဒီတုံးက မိုးကုတ်ကပတ္တမြားအရိုင်းတတုံး (မသွေးထားသေးဘူး) အလေးချိန်တော်တော်များတယ်လို့ ပြောတယ်...။ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပါ ။တွေ့ တော့ အရမ်း
ကြီးပြီးတန်ဖိုးလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဟင်းဟင်း...မှောင်ခိုဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်ရောင်းလို့ မရတော့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ စပ်ဟပ်ပြီးရောင်းတာ..ပြင်သစ်ကလူနဲ့ ဈေးတည့်ထားတယ်ဆိုလားဘဲ...။
တန်ဖိုးကြီးတော့အဝေကမတည့်၊ဒီတော့တိုင်တာပြုတာဖြစ်လာတယ်လေ (ဒါကကိုယ်တို့ နိုင်ငံသား
ကျင့်ဝတ်လားမသိဘူး..အန်မတန်မှ တိုင်တတ်ဂုံးချောတတ်တယ်...ဟီး) ဒီတော့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက လိုက်တာပေါ့...။ကျိုင်းမယ်မှာ အရောင်းအဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ ဒီအထိကိုလိုက်လာကြတယ်လေ...။
ထောက်ဆရာကြီးတွေက အယောက် ၃ဝကျော် တောင်လာတယ်တဲ့။ ကိုယ်တို့ ဆီကထောက်ပညာ
(အတိုကောက်ပေါ့ရှင်ရယ်..ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စွက်ဖတ်ပေါ့..နော့်.. :) အင်မတန်မှတော် တယ်ဆိုလား
ဇင်းမယ်တလွှားမှာရှိတဲ့ ကျောက်သူဌေး၊ပွဲစားအိမ်အားလုံး စါရင်းရှိတယ် တဲ့......။
တနေ့ ကျတော့ မယ်ငီးဆိုင်ရှေ့ ယိင်းတံခါးလိပ်ကို ကျလိန်းကျလိန်း နဲ့ မတင်နေတာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ လူ၂ယောက်၊တယောက်ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ ကင်မရာနဲ့ ချိန်ထားတယ်။ တယောက်က စက်ကိုနိုးထားတယ်။ပြီး...ကလစ်ကလစ်နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေမြောက်များစွာ ရိုက်ယူခြင်းခံရတယ်။ရင်ခုန်လိုက်တာ။
နောက် ဝူးကနဲမောင်းပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ ညနေကြတော့ အိမ်ရှေ့ ကိုဘေးဝင်းတံခါးကနေထွက်ပြီး လမ်းလျောက်တာလည်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်...။အရမ်းအံသြလို့ ...။ဘာမှန်းလည်းမသိ။
ဒါနဲ့ Mအမ ကိုပြောပြီးစုံးစမ်းကြည့်တော့ ဂလိုဂလိုဇာတ်လမ်းတွေ ရှိတယ်တဲ့...။ပြန်မိသွားတယ်လို့ကြားတယ်။ အဲဒီကျောက်ကိုအခု ရန်ကုန်ကမ္ဘာအေးကျောက်မျက်ပြခန်းမှာထား တယ်တဲ့။အားလုံးမိသွားမှ ထိုင်းကရဲတွေ တို့ ရွှေပြည်သားများ ကျုးကျော်ဝင်ရောက်စစ်ဆင်ရေးဆင်နွဲသွားတာသိရတော်မှုပါသတဲ့..။
ထိုင်းညကျောင်းမှာလည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးလို့ အလုပ်လုပ်ရင်းကျောင်းတက်တဲ့ သူတို့ ထိုင်းတွေက နဲနဲ...၊
ကိုယ်တို့ ရွှေနိုင်ငံသားတွေက ဖောချင်းသောချင်းပေါ့..။ကရင်အုပ်စုတွေက နံပါတ်တစ်...တော်လှန်ရေး၊
မျိုးဆက်တွေ ကျမတောင်အဲ့ခေတ်က သူတို့ လူကြီးသားသမီး၊တွေနဲ့ အတူတူတတန်းထဲကျောင်း
တွေလည်းအများကြီးဘဲ...။(အဲဒီတုံးက ကျောင်းသားအုပ်စုဆိုတာဝင်လာခါစ..နေမှာ၊သိပ်မတွေ့ ရသေးဘူး)
မန္တလးက ကျောက်သူဌေးတရုတ်တွေရဲ့ အဆက်လည်းရှိတယ်..ပိုက်ပိုက်ကပေါတော့..ဆောင့်ကြွားကြွားဗျ၊
အဲကတဲကစပြီးကျမတွေ့ ရတာက မြန်မာပြည်ကနေ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ လာကြသလဲ..ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ..
လူတန်းစားခွဲခြားတာလေ...ဟင်းဟင်း...မယုံမရှိနဲ့ ။ကျမတို့ နိုင်ငံသားတွေက နံပါတ်တစ်ဘဲ...။
ဘာနဲ့ လာလဲ...ဒီလို အရင်မေးတာ...။TG နဲ့ လာတယ်လေ..လို့ ဖြေရင် တမျိုးတဲ့..။တောင်ကျော်တွေပါကွာ ဆိုရင် နဲနဲတဆင့်နိမ့်သွားတဲ့သဘောပေါ့..။ ဟား..ကိုယ်လား..ကိုယ်လည်း Tတောင် Gကျော် ဆိုတော့...၊
TG လို့ ဖြေတာပေါ့... :D ခုဒီအမေရိကားမှာလည်း ဒီလိုဘဲ ဘာနဲ့ လာလဲ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်နဲ့ လား ခုန်နေတာလား ကျောင်းသားနဲ့ လား...ဘလားဘလား..အတော်ရှည်တဲ့ရွှေတွေ...မယ်ငီးက
စကားဝဲတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းက မှတ်လို့ တဲ့...ရှောင်ကြပါတယ်..(တကယ့်ကိုယ်တွေ့ ပါ) အူတက်အောင်ရီရတယ်...သနားစရာ ..မေးချင်ပါတယ်..စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဆိုရင်ကော ဘာဖြစ်လဲ ပုခုံး၂ဖက်ကြားမှာဦးခေါင်းပေါက်တဲ့လူ..ခင်ဗျားတို့ နဲ့ အတူတူဘဲဟာ...ဘာနှိမ်စရာရှိလည်းနော့်..။
ကျောင်းထဲအတန်းထဲမှာ သူတို့ တွေ(ကိုယ်တို့ ရွှေတွေပေါ့ရှင်)အုပ်စု ခွဲတွေအများကြီး..ဘာညာအုပ်စု ဟိုအုပ်စု ဒီအုပ်စုနဲ့ အရမ်းမိုက်တယ်..။ဗမာစကားတယောက်မှမပြောကြဘူး...။ထိုင်းလိုဘဲပြောကြတယ်...။
မယ်ငီးတယောက် ဗမာလိုအော်ဟစ်ပြောဆိုနေလို့သူတို့ ထဲက ကျမကိုလက်လေးတို့ပြီးတိုးတိုးလေး
ပြောတယ်။နင်ရှမ်းဆိုရင် ထိုင်းလိုပိုတတ်မှပေါ့တဲ့ ၊ထိုင်းလိုဘဲပြောပါလားတဲ့...။
အတန်းထဲမှာစားမေးပွဲစစ်ရင်လည်း ကိုယ်တို့ ရွှေပြည်သားတွေဘဲပေါ့..နံပါတ်တစ်..ဘယ့်နှယ်..၁+၁=၂
ဆိုတဲ့မူလတန်းပညာလေးတော့ အတွေ့ အကြုံမြောက်များလှစွာသော ရွှေရွှေတသိုက် အတွက်တော့ ...
ရီတာပေါ့နော့်...အဟီးဘွဲ့ ရမယ်ငီးတော့ နံပါတ် ၂ ချိတ်တယ်။ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ ၁ မမကနေလာတာ ၁၅ နှစ်ရှိပြီတဲ့..ရှမ်းတရုတ်တဲ့..ထိုင်ဝမ်သွားမလို့ လုပ်နေတာတဲ့....။အဲဒီတုံးကဆို မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့လူ
တော်တော်များများဟာ ဂျပန်သွားဖို့ ထိုင်ဝမ်သွားဖို့ ဟိုနိုင်ငံသွားမလို့ ..ဆိုတာတွေချည်းပါဘဲ..ဒါပေမဲ့ သူတို့ အားလုံး ထိုင်းမှာသောင်သင်နေထိုင်ကြပြီး တယောက်ပတ်စ်ပို့ တယောက်ခိုးဖို့ ချောင်းနေကြတဲ့ခေတ်
ပေါ့..မြန်မာပတ်စ်ပို့ အရမ်း ပျောက်တတ်တဲ့အချိန်ပေါ့..ကိုယ်တို့ ကတော့ ပတ်စ်ပို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုကြီး မှန်းတောင်မမြင်ဖူးသေးဘူး...:) အဟဲ..သူများပြောဆိုသံကြားဒါတွေ...ပြန်ပြောပြတာပေါ့ရှင်..
ရွှေပြည်ကြီးကလူတွေအကြောင်း မယ်ငီးအကြောင်း ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ
သိပ်ရှည်နေရင်လည်း မိတ်ဆွေများအညောင်းမိကုန်မှာစိုးလို့ ပါ...^_^
Posted by မီးမီးငယ် at 8:41 AM 10 comments Links to this post
အခန်းဆက်ရုပ်သံဆက်လမ်းတွဲတွေအတိုင်းပေါ့..နောက်ဇာတ်လမ်းတွဲလာရင် အရှေ့ ကအခန်းနဲနဲလေး
ပြန်ပြတယ်လေ...။ထိုနည်းလည်းကောင်း.....နယ်စပ်မြို့ လေးကနေ လူ့ လောကရောက်လာပြီး မယ်ငီး
တယောက် မြို့ ငယ်လေးမှာမူလတန်းပညာသင်၊အူကြောင်ကြားနဲ့ တောင်ကြီးမှာ အလယ်တန်းပညာဆည်း ပူး...၊ဟော..အထက်တန်းရောက်တော့ ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားဘဝရောက်၊ကြောင်တောင်
တောင်နဲ့ ဒေသကောလိပ်၂ ဆိုတာတက်ရသေးတယ်လေ...။
နောက်ပြီး ရာဇူးကမမ လုပ်တာပေါ့....။ပညာစုံတော့ တောပြန်ရတယ်.။ဆက်တက်လို့ လည်းရဘူး..လေ။
နောက်ဆုံးနှစ်ရမှတ်ကလည်းဂုဏ်ထူးတန်းဆိုတာလည်းမမှီပါဘူး...။ နောက်ဆုံးတော့ မြို့ လေးမှာကျူ ရှင်
တိန်း..တိန့် ..တိန်း...(နောက်ခံတီးလုံးသံလေ..အမြန်ပြကွက်နဲ့ ပြသွားတယ်လို့ သဘောထားပေးပါရှင်:))
အဟီး...အခုပြောတဲ့အကြာင်းအရာတွေ အောက်ကခေါင်းစဉ်ထဲကအကြောင်းအရာမှာ မပါခဲ့ရင်၊
ဖြည့်စွက်ပြီးသာမှတ်ပေးလိုက်ပါနော်...^_^ အခု မယ်ငီး ကျိုင်းမယ်ခေါ်သွားမလို့ ..။.
သွားပါသဖြင့်၊ယခုမှပြန်လည်တင်ဆက်ရပါသည်။ချစ်လှစွာသော မိတ်ဆွေများအားလုံး...တွေ့ ပုချိ sorry ပါ။
ကျိုင်းမယ်ရောက်ရောက်ချင်း၊ဘန်ကောက်သွား၊ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားလည်တာနဲ့ ပျော်လို့ ..။ကျမနဲ့ 
သွားတဲ့အမကြီးတွေပြန်မယ်ဆိုတော့ တည်းတဲ့အိမ်က အမကြီးနဲ့ သူတို့ ဆွေမျိုးတသိုက်၊ဝိုင်းပြီးနားချကြ
(အချိန်ကလည်း မြန်မာပြည်ရှစ်လေးလုံးပြီးခါစ လပိုင်းဘဲရှိသေးတာ)။
လူကလည်း နဲနဲမပြောနဲ့ ခေါင်းကတန်းငြိမ့်တာဘဲ...အိုကေ..ဒါပေမဲ့ မယ်ငီးရှမ်းဆိုပေမဲ့..ဆဝါဒီခ့ါ ကလွဲလို့ ၊
ထိုင်းစာဘာမှမတတ်ဘူးနော်...လို့ ပြောရတာပေါ့..။ကိစန မရှိပါဘူးကျောင်းနေရမှာတဲ့...။ အားလုံးစီစဉ်
ပေးမယ်ဆိုဘဲ...( ဟောတွေ့ လား...အပ်ချလောင်းဆိုပြီး လူလုပ်ရင် ဘာမဆိုဖြစ်တယ်)သူတို့ကဟိုးအဝေး
ချွင်းချက်တော့ သူတို့ ဆီကမှာခလေးတွေအများကြီးဘဲ...အော်..အားလုံးကကျမတို့ ဆီကနေလာကြတာ
ရောက်ခါစလေးတွေ၊ အဲဒီခလေးတွေကိုညညစာပြခိုင်းပါတယ်။နေ့ လည် သူတို့ အလုပ်မိတ္တူကူးတာ၊
ရေခဲချောင်း၊အချိုရည်ဗှုးတွေလည်းရောင်းတယ်။အဲဒါ လုပ်နေတဲ့သူ့ သမီးလေးက ဘာမှမတတ်ဘူး...။
ကောင်မလေးကလည်း ငယ်သေးတယ်။အားအားရှိ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဝူးနေတာဘဲ...။ဖုံးလာလူလာရင် ကျမ
တယောက်ထဲ..ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး...။ တခါခါရီရတယ် copy ကူးတာကို ကူးတဲ့စက်နံမည်က xerox
လေ..။ဒီတော့တချို့ က စီလော့ လုပ်တယ်ပေါ့ ဒီလိုပြောကြတယ်..။အဲဒီမှာရှိနေတဲ့ကချင်ကောင်လေး
ကောင်မလေးတွေက သူတို့ ဘိုဆန်တယ်ပေါ့ စီလော့လုပ်ပါ...စီလော့လုပ်ပါ..နဲ့ ဒီလိုပြောတယ်..။
ကျမကတော့ တောသား ဘာနားလည်မလဲ copy လည်းမသိ xerox လည်းနားမလည်...ဟားဟား...။
တကယ်ဆို သူတို့ ကကျမကိုအတင်းခေါ်ထားတဲ့သူတို့ အမေအဒေါ်တွေကို၊စိတ်ခုတာလေ..။
သူတို့ တွေရှိရက်နဲ့ တခြားလူကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ပေါ့...။သူတို့ တွေလာကြတာပညာရေး၊
တပိုင်းတစနဲ့ အလယ်တန်းအထက်တန်း မရောက်တရောက်လေးတွေပါ...။
သူတို့ အချင်းချင်း သူတို့ စကားနဲ့ ဘဲပြောကြတယ်..။ကျမနားမလည်ပါဘူးဆိုတာ သိရဲ့ သားနဲ့ 
ထမင်းစားဖို့ ခေါ်လည်း ကချင်လိုပြောတယ်။အီးရော...အီးရော...ဒါဘဲ..တနေ့ နေ့ ....အီး..အီး..နဲ့ ၊
အချိန်တိုအတွင်းမှာ ကျမကချင်လိုတော်တော်နား လည်လာတယ်..။ငတုံးမှ မဟုတ်တာနော့်...။
ဟားဟား...မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးလို့ ..သိလား.။(ငရုပ်သီးတကယ်စပ်တယ်လို့ သူတို့ ဘာသာနဲ့ ပြောတာ:)
သူတို့ နဲ့ နေပြီး ကူညီလုပ်ကိုင်တဖက်ကလည်း ကျမကိုဘဝရှေ့ ရေးအတွက်ကူညီပေးတယ် ဆိုပြီး...
အဖေ့ကိုပြောလိုက်တယ်လေ..။အဖေကမေးပါတယ်။နေခဲ့ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလားဆိုတော့၊ဒီကလည်းမြို့ လေးနဲ့ 
ကွာခြားတဲ့အတွေ့ အကြုံတွေမြင်ရကြားရတော့ နေချင်တာပေါ့လို့ ....။ခဏနေမယ်ဆိုပြီးနေတာပါ။
အမနဲ့ ခလေးတွေတော့ ကျမကိုတကယ်သံယောဇဉ်ရှိတယ်..။သူ့ သမီးလေးကပြသာနာရှာတတ်တယ်..။
ရောက်ပြီး ၂ပတ်လောက်မှာ ညကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့ ထိုင်းညကျောင်းသွားတက်ပါတယ်။အမ(အော်
သူ့ နာမည်က M)စာရွှက်လေးတပိုင်းပေးပြီးသူ့ သမီးလေးက ကျမကိုကျောင်းဝတ်စုံဆင်ပြီး၊ကျောင်းသား
ရေးရာမှာသွားအပ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ အတန်းပြီးရင်ကျောင်းပေါက်ဝမှာစောင့်နေမယ်နော်ဆိုပြီး..
တာတာ လုပ်သွားပါတယ်..။ကျမက တကယ့်အူကြောင်ကြားကြီး...ဘာမှလည်းမပြောတတ်ဘူး...။ဘာလုပ်
ပြောမှန်းလည်းမသိ လူကိုဆွဲခေါ်သွားပါတယ်..။အတန်းတခုထဲဝင်သွားပြီး... ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ 
မိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့..။ ခုံလွတ်တခုမှာဝင်ထိုင်ပြီး ယောင်တောင်ပေါင်တောင်လုပ်နေတယ်။ခဏကြတော့
ဆရာမက ကျမကိုခေါ်ပါတယ်(စာရွှက်ထဲကနံမည်က တောင်ပေါ်သားနံမည်တခု နဆီးလအူးဆိုလား...
တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့နာမည်...)ဘယ်ကနေလာလည်းလို့ မေးပါတယ်။ကျမသူ့ ကိုကြည့်ပြီးပြုံး ပြပါတယ်။
ထိုင်းလို ချိုက်မိုင် ချိုက်မိုင်..နဲ့ မေးတာလေ...။၃ ခါလောက်ခေါင်းညိတ်ပေးပြီး၊စဉ်းစားမိတယ်၊ဒီတခါ ခေါင်း
ခေါပေးအုံးမှဘဲ...။တချိန်လုံးညိတ်နေရင်မှားမယ်လို့ ထင်တာနဲ့ ...။နောက်ဆုံးခါလိုက်မှ ထိုင်ခိုင်းတော့တယ်။
နောက်မှသိတဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ကပြန်ပြောပြမှသိရတယ်...။ကျမကိုလီရှောတရုတ်အဆက်မှတ်လို့ တဲ့ ကျိုင်းရိုင်းဖက်မှာရှိတဲ့တောင်တန်းဖက် ကလာလားလို့ မေးတာတဲ့...။ကျမခေါင်းခါတဲ့အခန်းက မိဘရှိသေးလားလို့ မေးတာ..ဆိုဘဲ...သေရာ။ သွားပြီ........@_@
နေ့ လည်ဆိုလည်း အူတူတူဇတ်လမ်းတွေရှိတယ်။၊ ဖုံးဝင်လာရင် ဆဝါဒီခါ...ဆိုပြီး ဆက်မှမပြောတတ်
တာ...။ဟား..အတော်လေရှည်တဲ့ထိုင်းတွေ အထီးရောအမရော အီးညောင်အိညောင်နဲ့ မပြီးဘူး...။
အိမ်က ကျောက်စီမ်းသူဌေးတသိုက်ကလည်း..အီးရော့..အီးရော့....ရှီ..ရှီ...ရှီ..ဒါဘဲ...၂ ရက်လောက်နေ တာနဲ့သိတယ်...ရှီ ...ဆိုတာ "သူ "ကျမကိုညွှန်းတာပေါ့...ဟင့်...:(( (နောက်တော့ သူတို့ ရဲ့ ဦးလေး
ဆိုလားအကိုဆိုလား အကိုကြီးတယောက်နဲ့ တွေ့ မှသိတာ.. သူပြောပါ တယ်။အီးတလုံးတတ်ရင် ကချင်စကားတတ်ပြီတဲ့...:P ) ခုထိ နဲနဲပါးပါး မှုတ်တတ်နေသေးတယ်နော့်..။
ကော်ပီ စီလော့ပေးလိုက်တာပေါ့...သူက မိုက်ချိုက် မိုက်ချိုက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတာ..။
အော်...မှင်ကမွဲနေလို့ လား ဆိုပြီးနောက်တခေါက်ပြန်ကူးပေးလိုက်ပါတယ်..။အဲဒါလည်း မိုက်ချိုက်ဆိုဘဲ။
နောက်..သူပြောတာကို...ကြောင်ပြီးကြည့်နေမှ စာရွှက်ကို သူက သိမ်းထား ခိုင်းတဲ့ ပုံစံ လုပ်ပြတယ်..။
သူပြန်ထွက်သွားမဲ့ပုံစံလုပ်ပြတယ်..ပြီးနောက်နေ့ မှ ပိုက်ဆံလာကောက်မယ်။ထိုင်းလို ဝှမ်းဘီး ( bill )
အဟီး...ဒီကတော့ ၂စောင်ကူးပေးလိုက်တယ်.....:P သိမှမသိဘဲကိုး...။
ရေခဲချောင်းရေခဲမှုန့် တွေထဲ့တဲ့ သေတ္တာပုံးကြီးလှပ်ပေးလိုက်တယ်..ပြီး လက်လေးညွှန်ပြလိုက်တယ်...။
M အမရဲ့ အမေကပိုဆိုးတယ်..သူလည်းပြသာနာကို၊မီးခွက်ထွန်းရှာတတ်တဲ့နေရာမှာပြိုင်စံရှားပါတယ်။
ကျမတို့ တလတလမီတာခတွေဘယ်လောက်ကျသလဲလို့ လာမေးပြီးတညမှာရေခဲသေတ္တာပုံးကြီးကို
ဆက်သွယ်တဲ့မီးကြိုးကို ပလပ်ဆွဲနှုတ်ထားတယ်။ မနက်ဆိုင်ဖွင့်တော့တခန်းလုံးရေတွေစီးကပ်စီးကပ်နဲ့ရွှဲပြဲနေတာပေါ့.။ရေခဲချောင်းတွေအရည်ပျော်ကုန်တယ်အားလုံးဝဲပစ်ထုတ်လိုက်ရတယ်လေ..။အိမ်က ကျိုင်းမယ်ဘူတာရုံနဲ့ နီးတယ် လမ်းမတန်းပေါ်မှာ။ ကပ်ရပ်တိုက်တန်းတွေမှာလည်း ကားရောင်းတဲ့
ကုမ္မဏီ၊အပေါင်ဆိုင်၊ခလေးထိန်းကျောင်း ရုံး ဒါတွေပတ်ပတ်လည်ဘဲ...။ဒီတော့ ဆိုင်လေးကအမြဲ အလုပ် ရှုပ်တယ်။စီလော့ကလည်း လုပ်ရသလားမပြောနဲ့ .။တယောက်ထဲမနိုင်ဘူး။ သူတို့ အိမ်မှာအစစ အရာစီမံ ခန့်ခွဲဖို့ ထိုင်းကရင်မလေးတယောက်ကိုဌားထားတယ်။ သူကမြန်မာပြည် ကရင်မဟုတ်ဘူး..။ အဖေ အမေ
ရော ထိုင်းမှာမွှေးတဲ့ ကရင်မလေး..။ချစ်စရာလေး။ထိုင်း အထက်တန်းအောင်တယ်...။ကရင်မလေးက ကျမထက်ငယ်တော့ နောင့်ဖော၊ခလေးတွေ အတွက် Sunday school ဆရာမတယောက်နဲ့ သူ့ မောင်လေး
ကိုလည်း ထပ်ခေါ်တော့ ကျမမှာလက်ထောက် ကောင်လေးတယောက်ရလာတယ်။ညနေဆိုရင်ဆိုင်ကိုသူ့ 
နဲ့ ထားခဲ့ ကျောင်းပြေးတက်ရတယ်လေ။ဟိုသွားဒီသွားကြတော့ နောင့်ဖောရှိတယ်၊ကျောင်းသွားရင် ကောင်
မလေးရှိတယ်။ ကဲ.....ကျမအတွက်အားလုံး အဆင်ကိုပြေလို့...။
ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် Mအမက ကွန်ပြူတာဆရာဂျာမာန်တယောက်ကိုအိမ်ခေါ်လာပြီးသင်ခိုင်းတယ်။
အဲဒီတုံးက မော့စ်ဆိုတာတောင်မပေါ်သေးဘူး..။ဆရာကအင်္ဂလိပ်လိုပြော၊ထိုင်းလိုပြောနဲ့ ...တောသား
ငကြောင်လေးကလည်း သူ့ ကိုကြည့်ပြီး စဉ်းစားနေတယ် ဘာကြောင့်ဒီလောက်အရပ်မြင့်ပြီးနှာခေါင်းကြီးက
တတောင်လောက်ရှည်နေပါလိမ့်!!!! ဘာမှနားမလည်တာကိုး...အီးပြောလည်း နိုး...၊ထိုင်းပြောလည်း...
မိုက်လု့ ...ဟိ..အမတော့တော်တော်ပိုက်ဆံပေးရတယ်လို့ ပြောတာဘဲ...။ခုမှပြန်စဉ်းစားမိတာ သူ့ English
က German ဝဲနေတာကိုး....:))))) ပြီးရင် မင်းကောင်းကောင်းတတ်ရင် ခလေးတွေကိုသင်ပေးနော်တဲ့...။
မယ်ငီးတော့ကွန်ပြူတာအခြေခံဆိုတာသင်ပြီးသာသွားတယ် ...စက်ကိုဘယ်လိုစဖွင့်ရမှန်းတောင်သိဘူး။ ဂလိုပြောင်မြောက်စွာလေ့လာဆည်းပူးခဲ့တာလေ...။
ကိုယ့်ဘဝမှာ အမေတယောက်ဘဲ အတင်းအကျပ်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်တဲ့ သမီးကညာလေးကို၊လူတော
ထဲတိုးနိုင်အောင်လို့ ငယ်ငယ်ကတဲက အမေ့ဗီဒိုအာဏာနဲ့ မျိုးစုံသင်ကြားခြင်းခံ ခဲ့ရတာ...။ရှမ်းစာ၊
ဂုံစာ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဘုရားစာ၊ အကျီ င်္ချုပ်၊ဆွယ်တာစက်ထိုး၊တချောင်းထိုး.နွေကျောင်းပိတ်လို့ ၊မြို့ 
လေးပြန်ရင်တခါမှမနားရဘူး...အရမ်းကြီးစိတ်ပိန်ခဲ့ဖူးတယ်။M အမက ဒုတိယလိုက်တာဘဲ...ကွန်ပြူတာ အင်္ဂလိပ်ကျောင်း ထိုင်းကျောင်း ထမင်းချက် စီလော့ကအစကချင်အကတောင်ပါသေးတယ် Sunday school ဆိုတာ ၁နှစ်ကျော်လောက်တက်ရသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ ရတနာလုပ်ငန်းထဲ ရောက်အောင် တွန်းပို့
အိမ်က ၂ဆောင်အကြီးကြီး အနောက်ဖက်ဆောင်မှာအိပ်ခန်း၁၂ခန်းရှိတယ်။ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲရပ်။
အဲဒါကို သိတဲ့လူတွေကိုမိုတယ်သဘောမျိုးဌား သေးတယ်..။အဲဒီမှာ လာတည်းတဲ့လူတွေနဲ့ အူကြောင်ကျား
မယ်ငီးဇာတ်လမ်းတွေ ခလေးတွေတအုပ်နဲ့ စက်ဘီးပေါင်း ၉စီး ဆိုက်မျိုးစုံ ခလေးကလည်း ဘုစုခရု ၊
ဘူတာရုံပတ်လည်စက်ဘီးစီးထွက်ကြတယ်။ မြန်မာလိုအော်ဟစ်လိုက်..အီးရော့..အီးရော့နဲ့ ...တလမ်းလုံး
When I google I just saw all cartoon pictures that I love,so I copy it :P
Posted by မီးမီးငယ် at 1:31 PM 12 comments Links to this post
မတူတဲ့အကြာင်းအရာတွေကိုအတင်းဆွဲစေ့ပေးတတ်တဲ့ မယ်ငီးတယောက်တော့...ဒီတခါ မှာအစားအစာဆိုတဲ့(သူများတွေနေ့ စဉ်စားသုံးကြပေမဲ့လည်း)ကာလဒေသလူမျိုးကွဲပြားခြားနားတော့
သူတို့ စားတာတွေ ကျမအတွက် အထူးအဆန်း ကြီးဖြစ်နေလို့ ...နဲနဲအာလူးလေးပေးရအုံးမယ်...^_^
နောက်တလဆိုရင် ကျားကျားပရောဂျက်ကပြီးတော့မယ်(ပြောင်းဖို့ လည်းအသင့်ပြင်ထားရတယ်၊
ဒီတခါဘယ်ဌာနေရောက်အုံးမှာလဲမသိသေးဘူး) ဒီတော့ သူ့ အလုပ်ထဲကဂျာဂျာကြီးတွေ..အော်.. ဂျာမာန် ကုမ္မဏီ ဆိုတော့ ဂျာတွေချည်းဘဲပေါ့။ ဖဲရားပွဲလေးလုပ်ပါတယ်...။သူတို့ လည်းတနှစ်လာနေတာ၊ ရှာ တတ်ပါတယ်၊သူတို့ ရဲ့ ဘီယာဂါးဒင်းကို...၊တကယ့်ဂျာမဏီကိုခဏရောက်သွားတဲ့အတိုင်း၊ အပြင် အဆင်
စားစရာရောပေါ့..။ဘီယာတွေလည်း အင်ပို့ စ် ဂျာမာန်ဘီယာပါ...။နေရာက ဟတ်ဆန်မြစ် ကမ်းနှဘေး လေးမှာ (အော်...ဒီတခါသူတို့ ရဲ့ ပရောဂျက်နာမည်တောင် ဟတ်ဆန် ပရော ဂျက်လို့ ပေးထားတာ).....ဟတ်ဆန်မြစ်ဆိုတာ နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီကိုခြားထားတဲ့မြစ်ပေါ့...။
ကျမတို့ နေတဲ့နေရာကဂျော့ဝါ ရှင်တန် တံတား နဲ့ ပိုနီးတဲ့ဖက်အပိုင်းပေါ့...။
အမဲသားအစိမ်းကို တောက်တောက်စင်းပြီး ပေါင်မုန့် နဲ့ စားတာ..
သူတို့ အခေါ်Steak tartare.....
ကျမတို့ တော့ ..ဘီရုမာနဲနဲပီသသွားပါတယ်..အဟီး...အချိန်နာရီဝက်တိတိနောက်ကျပါတယ်...။
နယူးယောက်ကိုသွားမဲ့တံတားပေါ်အတက် ကားလမ်းကနေခွဲသွားရတဲ့နေရာဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း နယူးယောက်ထဲဝင်မဲ့ကားတန်းကြီးထဲမျောလိုက်နေရတာ...ဆင်ခြေပေးလို့ ကောင်းပေမဲ့၊စောစောကတဲက
ပုဂံအကြီးကြီးနဲ့ ပြည့်မောက်နေတဲ့အစားအစာတွေမြင်ပြီး၊ ဘာမှာစားရမှန်းတောင် မသိဘူး...။
ဂျာမာန်ရောက်ခါစက ကြုံဖူးခဲ့တဲ့အကြောင်းတခုပြောရအုံးမယ်...။သူတို့ ရုံးချုပ်ကို ကျမတခါမှမလိုက်
သွားဖူးဘူး..။Erlangen ဆိုတဲ့မြို့ လေးမှာပေါ့။ မဒမ်ကြီးရောက်လာတယ်ဆိုတော့ (အဟီး)....ဒင်းနားကြမယ်ဆိုပြီး..ဒီလိုဘဲဘီယာဂါးဒင်းကို ချိန်းကြတယ်လေ...။ တရုံးထဲနေတာတောင်
တပတ်အလို ကတဲကအီးမေးတွေနဲ့ ချိန်းကြပြုကြနဲ့ လေ..။ထုံးစံသောကြာနေ့ ညနေခင်းပေါ့..
ကျကျနနပြင်ဆင်ဝတ်စားလို့ သွားပါတယ်..။ ဟိုရောက်တော့ ဘီယာချက်စက်ရုံတခုပါ..။
အစားကတော့ခြံအဝင်ဝနားကရုံလေးမှာတန်းစီ ဂျာမာန်ဝက်အူချောင်းကင် ပေါင်မုန့်ကော်ဖီထုပ်ချဉ် ဒီလိုလေးတွေရတယ်..။ ကျန်တာတော့ဘီယာ...။တခွက်မှာရင် တခွက်ရှင်း....စားစရာကြိုက်တာယူ..
ကျသလောက်ပေး..ထိုင်ခုံတန်းရှည်ကြီးမှာ.. မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်၊ ခွီးခွီးခွခွ အစ်အစ်အ့အ့ စကားတွေပြော..
(အဟဲ..ဂျာမာန်စကားနားမလည်ရင်သူတို့ ပြောတာဒီအတိုင်းဘဲကြားကြမယ်ထင်ပါတယ်...:P )
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုရှင်းလာရတယ်...ဒါမှ ဂျာမာန်စတိုင်...။အရင်တုံးက ရန်ကုန်မှာပြော
လေ့ရှိတာ အမေရိကန်စတိုင်က်ိုယ်စားကိုယ်ရှင်း..ဘယ်ကလာ...အမေရိကန်တွေမှ ကျွေးပါသေးတယ်...။
ဒီတခါသွားတာ ဘယ်လိုစတိုင်နဲ့ ညားမလဲဆိုပြီးကြည့်နေတာ တဝက်ရှင်း သောက်တာတွေကျွေးမယ်
အမဲသားစတိတ်နဲ့ အာလူး...။ သွားမကောင်းတော့၊ကိုက်လို့ မရဘူး...။ဒါလည်းမဖြစ်...။
ကျမက ဝက်အူချောင်းကင်မှာတယ်..အဲလိုအကင်ဆိုရင် အဆောက်အဦထဲက ဟိုးနောက်ဖက်မှာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တန်းစီဝယ်တဲ့...ကျန်တာမှာရင် လာပို့ ပေးမယ်ဆိုဘဲ...။တောသားကလည်း မီနူးထဲကမကြိုက်တတ်..ဒီတော့ အစားကိုဝယ်၊အရည်ကိုသူတို့ ကျွေးတာပေါ့...။ အယ်ကိုဟော်ဖရီးဘီယာ
ရလားဆိုတော့ မရဘူးတဲ့။ ဂျာမဏီမှာတော့မျိုးစုံရတယ်။တော်သေးတယ်၊မရှိတာမှာတော့ သောက်
မိုးချုပ်လာတော့ တိုက်နံရံပေါ်မှာ ပရိုဂျက်တာနဲ့ တီဗီပြပါတယ်...။အဆောက်အဦထဲမှာထိုင်ရင်တော့
အဲယားကွန်းနဲ့ ဆေးလိပ်မသောက်ရဘူးပေါ့..။အပြင်ဖက်မှာတော့လွှတ်လပ်တယ်.နဲနဲပူတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့
လေတော့တိုက်ပါတယ်...။ စားပွဲထိုးမလေးတွေလက်၂ဖက်နဲ့ ဘီယာခွက်ကြီး ၄ ၊၅ ခွက်ဘယ်လာနိုင်တာ၊
ကိုင်း...ဒီတခုကြတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နွေကတဲကပါ၊ ချစ်မိတ်ဆွေမအိုင်အိုရာရဲ့ လယ်သမားဈေးကို အားကျလို့ကျမတို့ နားကလယ်သမားဈေးကိုရှာပြီးသွားတာပါ။ မအိုင်အိုရာတို့ ဖက်ကလိုလည်းဟုတ်ဘူး...။
ဥရောပဖက်ကပြောင်းလာတဲ့ လယ်သမားကြီးတွေဖြစ်နေတော့ သူတို့ အစားအစာတွေဘဲရှိတယ်။
ဂရိအစားစားတွေတဲ့....ချိစ်တွေသစ်သီးစေ့တွေ...နဲ့ ...လားမသိဘူး။မုန့် နာမည်တောင်မေ့နေပြီ..။
အဖိုးကြီးတယောက်ထဲရောင်းနေတာ သနားလို့ ဝယ်စားခဲ့တယ်...။
ကြင်ကင်နဲ့ bita bread ...(စားချင်စရာပုံကိုမထွက်ပါဘူးဆို...)
နောက်တနေရာကတော့ ကျမတို့ နဲ့ နီးတဲ့ ကိုးရီးယားစူပါမားကက်ပါ။ တခြားရောင်းတဲ့ဟင်းရွှက်သားငါးတွေတော့ ကကြီးအကြိုက်သူတို့ အစာတွေပါ..။
ကိုယ်နဲ့ ချက်လို့ အဆင်ပြေမဲ့အရွက်တွေဘဲရွှေးဝယ်တတ်ပါတယ်..။
အဲဒီမှာကျမစိတ်ဝင်စားပြီးဝယ်လေ့ရှိတာက၊သူတို့ ဟင်းတွေနဲ့ တခြားမုန့် တွေ ချက်ရောင်းတဲ့နေရာပါ။
တချို့ ဟာတွေဆိုကိုယ်လည်းမစားဖူးဘူး...။ တလောက အစာအဆိပ်ဖြစ်ကတဲက လျှာရင်းလေး လိပ်သိမ်းထားရတယ်...။အဟီး @_@
ပေါက်စီ၊အသားပေါင်း တို့ ကတော့ စားလို့ ဖြစ်ပါတယ်...။သတ်သက်လွတ်ဟာမျိုးတွေရှာယူတယ်..။
ပေါက်စီအထဲကို ခွဲကြည့်တာ..ကျမကျားကျားကတော့ သူတို့ မြက်တွေအများကြီးထဲ့တာတဲ့..:P
ကျမတော့ ကြက်သွန်နီနဲ့ အသား၂ မျိုးဘဲထဲ့ရင်ပိုစားကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။
သူတို့ ဟင်းရည်တွေ...သူတို့ က ငါးနဲ့ အမဲသားကိုအဓိကထားပြီးဟင်းရည်ချက်တာကိုး...။
အရွက်ကြော်တဲ့...ကျမတို့ လို ကြက်သွန်ကြာ်၊ဘူးသီးကြော်...လိုနေမှာပေါ့...။
ဂဏန်းနဲ့ ဝက်သားပြားကြော်...။ကျမကျေးဇူးရှင်တော့ ပုဇွန်ပေါင်းဝယ်လေ့ရှိတယ်...။သူကြိုက်တယ်လေ...။
အဝင်ဝက မုန့် ဆိုင်...။မုန့် တွေက အရမ်းကြီးချိုတယ်..ကျမမကြိုက်လို့ နေမှာ(ကျမအချိုသိပ်မစားဘူးလေ)
ဒါတော့ ကျမတို့ ဆီကနဲ့ အတူတူဘဲ..ပါးညောင်းအောင်ဝါးရတယ်...။ ၁.၉၉ ဘဲပေးရတယ်...။
ဒါကကိုးရီးယားကောက်ညှင်းမုန့် တဲ့..ပဲနဲ့ သူတို့ မုန့် တွေတကယ်ပါးညောင်းအောင်ဝါးရပါတယ်လေ...
အမေရိကားအရှေ့ ဖက်ပိုင်းမှာ ဒီဆိုင်က အကြီးဆုံးဆိုင်လို့ ပြောတယ်...
Posted by မီးမီးငယ် at 5:34 PM 14 comments Links to this post
Posted by မီးမီးငယ် at 3:11 PM 16 comments Links to this post